Induction Brazing Steel Tips amin'ny fampisehoana mahazatra
Induction Brazing Steel Tips amin'ny Hihg Frequency Heating System
Tanjona hanafana ny tendron'ny vy ary ny fivondronana hidina hatramin'ny 1300 ° F (704 ° C) ao anatin'ny 3 segondra ho an'ny famokarana brazing miaraka amin'ny fanafanana fampidirana fa tsy ny fanilo torch.
Fitaovana 0.1 "(2.54mm) savaivony vy vy sy shank, 0.07" (1.78mm) peratra boribory savaivony
Fitaovana fanamafisam-peo fampidirana DW-UHF-4.5kW, toeram-pivarotana hafanana lavitra misy capacitor 1.2 microfarad.
Fomba fanodinana coil helika roa fihodinana no ampiasaina hanamboarana ireo faritra nify. Ny peratra braze dia apetraka amin'ny faritra iombonan'ny tendron'ny vy sy ny shank. Ny flux mainty dia apetaka amin'ny faritra iaraha-miasa. Ny herinaratra RF dia ampiharina mandritra ny 3 segondra mba hanafanana ny ampahany amin'ilay mari-pana kendrena efa napetraka ary ny paty matevina dia mivezivezy sy mitohy.
• Hafanana haingana, marina ary azo tsinontsinoavina
• Fahaizana manafana faritra tena kely ao anatin'ny fandeferana amin'ny famokarana
• Tsara kokoa ny fiaraha-miombon'antoka, mihena ny okontana
• Mampitombo ny taham-pamokarana ary mihena ny fandaniana amin'ny asa
Sokajy Technologies Tags matetika avo brazing torohevitra, induction brazing steel, induction brazing tips tips, induction brazing tips, RF Tips Post Fikarohana